Café sy Cafeteria amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Cafe / Cafeteria ho an'ny varotra ao amin'ny Busy Office Complex akaikin'ny Ibn Battuta Mall. Efa manana varotra tsara ary mila amidy. Faritra: 355 SQ Ft anatiny sy fotodrafitrasa hananana ivelan'ny fisakafoanana ihany koa Amidy eo ho eo isan'andro AED 1800 Shop Rent AED 57K Utili ...
Date : Aogositra 2, 2021
Cafe / Cafeteria ho an'ny varotra ao amin'ny Busy Office Complex akaikin'ny Ibn Battuta Mall. Efa manana varotra tsara ary mila amidy.
Faritra: 355 SQ Ft anatiny sy toerana hanaovana ivelan'ny fisakafoanana koa
Amidy eo ho eo ny varotra isan'andro AED 1800
Manofa fivarotana AED 57K
Fitaovana (raikitra) AED 15K
Amin'izao fotoana izao dia mivarotra burger, Sandwich, kafe, dite sns.
Tsena lehibe (zaridaina, Jebel Ali Village, JLT, Dubai Marina, Discovery Gardens, Ibn Battuta Mall sns)
Mifandraisa amin-katsaram-panahy raha tena liana ianao
#Cafe sy Cafeteria amidy
#Cafe sy Cafeteria amidy any Dubai
#Cafe sy Cafeteria amidy any uae
#Well Running Cafe sy Cafeteria amidy any Dubai